Xildhibaan Afaraale oo kawar bixiyay waxyaabihii u qabsoomay Guddiga loo magacaabay baaritaanka dadkii lagu laayay Gaalkacyo – Kalfadhi
Xildhibaan Afaraale oo kawar bixiyay waxyaabihii u qabsoomay Guddiga loo magacaabay baaritaanka dadkii lagu laayay Gaalkacyo
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo ah Guddoomiyaha Guddiga Xildhibaanada ah ee dhowaan loo magaacaabay baaritaanka iyo ka soo warbixinta dhacdadii lagu laayay ilaa 10 qof oo shacab ah islamarkaana ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay.
Maxamed Xuseen Afaraale ayaa sheegay in ay la kulmeen dhamaan dhinacyada tabashada qaba ee Odayaasha dhaqanka iyo qaybaha Bulshada waxayna ka dhageesteen walaaca ay qabaan ee dhanka amaanka iyo talooyin ay soo jeediyeen.
“Dadkaan waa nabad ku nool waxayna naga dalbadeyn in aan u raadino badbaado iyo amaan iyo sidii ay degaankooda ugu sii noolaan lahaayeen” ayuu ku yiri Wareysi uu siiyay Kalfadhi Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale.
“Waxaan kula talinay in ay soo dhistaan guddiyo la shaqeeya hey’adaha amaanka iyo maamulka degmada kuwaas oo iska kaashada sugidda amaanka” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Afaraale.
Dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug 14-kii bishaan ayaa laysku afgartay in Magdhow laga bixiyo waxaana durba odayaasha dhaqanka ay bixiyeen qayb kamid ah Magta dadkii la dilay.
“Waxaan soo dhowaynay is-afgaradkii ay gaareen odayaasha dhaqanka labada dhinac ee ah in Magdhow laga bixiyo dadkii lagu dilay Gaalkacyo” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo ah Guddoomiyaha Guddigii Xildhibaanada ahaa ee ku baxay dilka dadkaasi.
Guddiga ayaa u mahadceliyay dhamaan dadkii ka qayb qaatay in xal laga gaaro falkii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug, si gaar ah waxay ugu mahadceliyeen Senator Cabdi Xasan Caawale Qaybdiid oo waqti badan geliyay in xal loo helo Xasuuqii Gaalkacyo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ku baaqay in la adkeeyo midnimada Soomaaliya